အိအိစိုး - ကျွန်ဘ၀နဲ့ ကျွန်စိတ်ကနေ လွတ်မြောက်ကြဖို့ အရေး - MoeMaKa Media
Home / Currents / Ei Ei Soe / Features / အိအိစိုး - ကျွန်ဘ၀နဲ့ ကျွန်စိတ်ကနေ လွတ်မြောက်ကြဖို့ အရေး
Currents, Ei Ei Soe, Features
(မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၂၁
အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်စနစ် - အပိုင်း (၁)
၂၀၁၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစလို့ သတင်းတွေထဲမှာ လူဖြူကြီးစိုးရေး၊ လူဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒီ၊ အသားအရောင်ခွဲ ခြားဆက်ဆံခြင်း စသည်ဖြင့် အမြဲလိုလိုနားထောင်၊ ဖတ်ရှု့နေရပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆိုတာ လူဖြူတွေကြီးပဲကြီးစိုးဖို့ နိုင်ငံမဟုတ်သလို လူမည်းတွေကြီး တဘက်သတ်အခွင့်အရေးရပိုင်တဲ့နိုင်ငံ မဟုတ်ပါဘူး၊ တကယ်တမ်း မူလလက်ငုတ်နေထိုင်ခဲ့သော လူမျိုးများဟာ Native American လို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးစုတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းနေထိုင်သူများထံ ဥရောပက လူဖြူများ ဝင်ရောက်နေရာယူရာကနေ အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာပါတယ်။ ဒီလို မတူညီသောကွဲပြားခြားနားသော လူမျိုးစုများ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည် မှု၊ အသားအရောင် ဖြူ နီ ဝါ မဲ စသည်ဖြင့်တို့ပေါင်းစည်းနေထိုင်သော ဒီမိုကရေစီအုတ်မြစ်ခိုင်မာဆုံးလို့ ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများက လက်ခံသော အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ ခံယူချက်ပေါင်းစုံ စတာတွေ အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းစွာပေါင်းစည်း နေထိုင်ခြင်းကိုက သူ့ရဲ့ အလှတရားဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ခုလက်ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံရေး ကဏ္ဍမှာ​ လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒီများပါဝင် ပတ်သက်နေမှုကို သမိုင်းကြောင်းနဲ့တကွ ဖတ်ရှုထားမိသည်များကို ပြန်လည်ဝေမျှရင်း ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း Discrimination၊ Racism ဆိုတာ ကျမ်းစာရှုထောင့်မှ ကြည့်ရှုဆင်ခြင်ပြီး ယုံကြည်သူတယောက်အမြင်ကို အပိုင်း ၃ ပိုင်းခွဲပြီးတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လာမယ့် တနင်္လာနေ့ဟာ လူမည်းအခွင့်ရေးခေါင်းဆောင် Dr. Martin Luther King Jr. ကို ဂုဏ်ပြုသောနေ့လည်းဖြစ်တာကြောင့် ဒေါက်တာမာတင်ကို ဒီစာနဲ့ ဂုဏ်ပြုလိုက် ပါတယ်။
၁၆ရာစုနှစ်မှာ မြောက်အမေရိက ကို ဥရောပတိုင်းပြည်များမှ ပြောင်းရွေ့အခြေချလာသူများထဲမှာ ၁၆၀၇ မေလ ၁၄ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် James River ရဲ့ ရေလက်ကြားကိုပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသုံးစီးနဲ့ ဆိုက်ရောက်လာတဲ့ အမျိုးသား ၁၀၅ဦး ဟာ ဗြိတိသျှလူမျိုးများရဲ့ ပထမဆုံးသော ကိုလိုနီနယ်မြေဖြစ်တဲ့ Jamestwon Settlement ကို ကနဦး တည်ထောင်သူများဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ အင်္ဂလန်မှာ လူဦးရေများ ထူထပ်များပြား လာမှုတွေအပြင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကွက်များ ရှာဖွေဖို့ နယ်မြေသစ်ကို ပြောင်းရွေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ အခြေချနေထိုင် သူတို့တွေ ထဲမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ဘာသာရေး တင်းကျပ်မှု့ကနေ လွတ်မြောက်ချင်တဲ့ Church of England ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့ Puritans တွေပါလာခဲ့တယ်။
အခြေချနေထိုင်သူတွေဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ဗာဂျီးနီးယား ကုမ္ပဏီရဲ့ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့ နယ်မြေသစ်မှာ ရွှေ၊ ငွေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း နဲ့ တခြားသယံဇာတတွေကို ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ သယံဇာတ ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အတွက် လူလုပ်အားလိုအပ်လာတယ်။ ၁၆၁၉ခုနှစ်မှာတော့ Jamestown ကို လူမည်း ၂၀ သယ်ဆောင်လာတဲ့ သင်္ဘောဆိုက်ရောက်လာတယ်။ ဒီလူမည်းတွေကို ကျွန်အဖြစ်စေခိုင်းဖို့ အာဖရိက ကနေ ဖမ်းခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ ကျွန်စနစ်ရဲ့ ကနဦး အစလည်းဖြစ်တယ်။ ၁၈ရာစုနှစ် တစုထဲမှာပဲ လူမည်းကျွန်ပေါင်း ၆ သန်း နဲ့ ၇ သန်း နီးပါး အမေရိကားကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် ကျွန်ပြုခံခဲ့ရတယ်။ လူမည်းတွေရဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုနဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုဟာ ကျွန်အဖြစ် အရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ရန် အကောင်းဆုံးသော အရည်အသွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။
အင်္ဂလန် ဘုရင်စနစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက် က လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းတဲ့ အမေရိကန်တော်လှန်ရေး အပြီးမှာ မြောက်ပိုင်းကိုလိုနီနယ်မြေတွေမှာ ကျွန်တွေရဲ့လုပ်အားများက ပြည်နယ်စီးပွားရေးအတွက် သိပ်ပြီးအရေး ပါတဲ့ ကဏ္ဍမှာမပါတော့ဘူး။ ၁၈ရာစုအကုန်မှာတော့ အမေရိကား မြောက်ပိုင်းပြည်နယ် တော်တော်များများ ဟာ ကျွန်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းလာတယ်။ သို့သော်လည်း တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာတော့ လူမည်းကျွန်တွေရဲ့ လုပ်အားနဲ့ မှီတည်နေရတဲ့ ဝါဂွမ်းနဲ့ ဆေးရွက်ကြီး လုပ်ငန်းတွေကြောင့် ကျွန်စနစ်ကို ပယ်ဖျက်ဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သူများထဲမှာ Quakers တွေလို ဘာသာရေးရှုထောင့်ဘက်ကနေ ကြည့်ပြီး ဖျက်သိမ်းဖို့ အားပေးခဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။
အမေရိကန်ကွန်ဂရက်က ၁၈၀၈ ခုနှစ်မှာ ကျွန်ရောင်းဝယ်ခြင်းကို တရားမဝင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပေမယ့် ကျွန်ရောင်းဝယ်ခြင်းကတော့ အမြစ်မပြတ်ပဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြစဲပါပဲ။ ကျွန်တွေကို တိရိစ္ဆာန်သား ဖောက်သလို ကလေးတွေများကြီးမွေးခိုင်းပြီး ရောင်းစားတာတွေ၊ ကျွန်မိန်းမတွေကို အဓ္ဓမပြုကျင့်ခြင်းတွေ၊ ထွက်ပြေးတဲ့ကျွန်တွေကို ပြန်ဖမ်းမိတဲ့အခါမှာ မသေရုံတမယ်နှိပ်စက်တာတွေ၊ အလုပ်လုပ်ရင်း ထိခိုက်မှုဖြစ်ပြီး ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းသွားရင် သတ်ပစ်လိုက်တာတွေ စသည်ဖြင့် ရက်စက်စွာနှိပ်စက်မှုတွေက အမေရိကန် သမိုင်းမှာ အဆိုးဝါးဆုံးနဲ့ အမှောင်မိုက်ဆုံးသော ကာလများရဲ့ ပုံရိပ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ အရေးကြီးဆုံးနဲ့ မေ့ဖျောက်ထားလို့ မရနိုင်တဲ့ လူမြောက်များစွာ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ပြည်တွင်းစစ် မီးရဲ့အစက ကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး အတွက် သဘောတူညီမှုမရဘဲ အငြင်းပွားရာကနေ အစပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၆၀ သမ္မတလင်ကွန်း တက်လာပြီးတဲ့နောက် အမေရိကန် မြောက်ပိုင်းပြည်နယ် တွေနဲ့ တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များအကြားမှာ ကျွန်စနစ်ပါယ်ဖျက်ရေး ကို သဘောတူညီမှုမဘဲ တောင် နဲ့ မြောက် ပြည်နယ်များကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ဟာ ၁၈၆၁ ဧပြီလ ၁၂ ရက်ကနေ ၁၈၆၅ မေလ ၉ ရက်နေ့အထိ လေးနှစ်တာ ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း ၁၀၅၀၀ ကျော် ဖြစ်ခဲ့ပြီး နှစ်ဘက်စစ်တပ်များ နဲ့ ပြည်သူများအပါအဝင် သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၈သိန်းကျော် အသက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဧပြီလ ၁၅ရက် ၁၈၆၅ မှာ သမ္မတလင်ကွန်းလုပ်ကြံခံရပြီး၊ ၁၈၆၅ မေလမှာတော့ တောင်ပိုင်းတပ်ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Robert E. Lee က, Virginia ဗာဂျီနီးယားပြည်နယ်ရှိ Appomattox မြိုံနယ်ကောင်တီ တရားရုံးမှာ ပြည်ထောင်စုတပ်ဖွဲ့များ နဲ့တွေ့ဆုံ လက်နက်ချခြင်းဖြင့် အမေရိကန် ပြည်တွင်းစစ်မီးငြိမ်းသတ်ဖို့ အစပြုခဲ့ပါတယ်။ ၁၆လ အကြာ ဩဂုတ်လ ၁၈၆၆ မှာတော့ အမေရိကန်ရဲ့ ၁၆ယောက်မြောက် သမ္မတဖြစ်သူ Andrew Johnson က ပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးကြောင်း တရားဝင်ကြေငြာခဲ့ခြင်းဖြင့် လေးနှစ်တာ ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်စစ်မီးကို အပြီးတိုင် အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်တော့ ၁၈၆၅ ဒီဇင်ဘာလ ၈ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးမှာ ကျွန်စနစ်ကို ချွင်းချက်နဲ့ ဖျက်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ လူမည်းကျွန်များကို လူမည်းကုဒ် Black Code ဆိုတာနဲ့ ကန့်သတ် ထားပြီး လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ မျှတစွာလုပ်ခလစာရပိုင်ခွင့် မရှိကြပါဘူး။ လူမည်းများကို အဖိနှိပ်ဆုံး ပြည်နယ်အများစုကတော့ အမေရိကန် တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၇၀ မှာတော့ ၁၅ကြိမ်မြောက် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပြင်ဆင်ပြီးနောက် လူမည်းများ တရားဝင်မဲပေးခွင့်ကို အတည်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနောက်တော့ ပြည်တွင်းစစ်ပြီး ခေတ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ကာလဖြစ်တဲ့ ၁၈၇၆-၁၈၇၇ တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များမှ လူမည်းများဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရလာကြပြီး ကွန်ဂရက် အထိအနိုင်ရရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ခုလိုလူမည်းများ တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များရဲ့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ် မှာ နေရာရလာခြင်းဟာ တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များရဲ့ လူဖြူကြီးစိုးရေးအစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒ White Supremacy ကို တဖန်ပြန်လည်ခေါင်းထောင်ထလာစေတယ်။
Ku Klux Klan (KKK) 1865၊ Knights of the White Camelia 1867၊ the White Brotherhood အစရှိတဲ့ လူဖြူအမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်အဖွဲ့များ တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များမှာ အသီးသီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ... ၁၈၆၇-၁၈၆၈ခုနှစ်အတွင်း ရွေးကောက်ခံ လူမည်း ဥပဒေပြု လွှတ်တော်အမတ် ၁၀ရာခိုင်နှုန်းဟာ အစွန်းရောက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး သူတို့ထဲက ၇ယောက်ဟာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ လူမည်းတွေရဲ့ စာသင်ကျောင်းများ၊ ဘုရားကျောင်းများဟာ KKK အဖွဲ့ရဲ့ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်စနစ် - အပိုင်း (၂)
လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒဆိုတာဘာလဲ? White Supremacy or White Supremacsim လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒ White Supremacists လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒီ ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အသားရောင်ကာလာရှိသော လူမျိုးများ ထဲတွင် လူဖြူများသာ အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ချယ်လှယ်ဖို့ အုပ်ချုပ်စိုးမိုးဖို့ရာ အထိုက်တန်ဆုံး သောသူများ ဖြစ်သည်ဟူသော အစွန်းရောက် အတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဂျူးလူမျိုးများ၊ လူမည်းများ၊ အသားရောင်ရှိသောသူများအပေါ် မုန်းတီးပြီး လူမျိုးရေးခွဲခြား ဆက်ဆံသူများဖြစ်သည်။ White Supremacy လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒသည် တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော Xenophobia နိုင်ငံခြားသားကြောက်ရွံ့မှု ရောဂါ၊ Anti-immegration ပြည်ပမှပြောင်းရွှေ့လာသူများကို ဆန့်ကျင်သောဝါဒ၊ anti-Semitism ဂျူးလူမျိုး များကို မုန်းတီးသောဝါဒ၊ Neo-Narzi နီရိုနာဇီဝါဒ၊ လူမျိုးကြီးဝါဒ၊ fascist ဖက်ဆစ်ဝါဒ စသည်တို့နှင့် အယူအဆ သဘောတရားရေးရာ ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေသော အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက် အတွေးအခေါ် ဖြစ်သည်။
လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒကို ထောက်ခံသူများမှာ မျိုးမတူ အသားရောင်ရှိသူများ ပါဝင်နေတာကို အံ့ဩဖွယ်တွေ့ဖူး ကြပါလိမ့်မယ်။ ထိုသူများကို စိတ်ပညာဘက်ပိုင်းက လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ မိဘဘိုးဘွားများ ဟာ လူဖြူများရဲ့ကျွန်ပြုခံခဲ့ဖူး သူတွေပါသလို၊ ကျွန်ပြုမခံဘူးပေမဲ့ လူဖြူဆိုရင် လူနေမှုအတွေးအခေါ် အမြင့်မြတ်ဆုံး အသိဉာဏ်ထက်မြက်ဆုံး အထက်တန်းကျဆုံးနေထိုင်သူတွေဖြစ်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဦးဆောင်အုပ်ချုပ်ရန်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးဆိုပြီး တဖက်ပိတ်တလွဲ အတွေးအခေါ်ရှိသောသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ အငုံ့စိတ်ထဲကနေ လူဖြူများကို အထင်ကြီးအားကျသူများဖြစ်ပါတယ်။
အသားရောင်ကြောင့်ခွဲခြားဖိနှိပ်ခြင်း၊ လူမှုရေးရာတရားမျှတမှုမရှိခြင်းများကို ကာလကြာမြင့် ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ရပြီး ဆယ်စုနှစ် တစုကြာတဲ့ အခါမှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသမိုင်းမှာ Civil Rights Movement ပြည်သူ့ရပိုင်ခွင့် လှုပ်ရှားမှုကြီး ပေါ်ပေါက်လာပြီး၊ ၁၉၅၄ ကနေ ၁၉၆၈ အထိ ဆယ်စုနှစ်တခုကျော် ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးဟာ ပြည်တွင်းစစ်ပြီးကာလ နောက်ပိုင်းမှာ အမေရိကန်လူမည်းများ နိုင်ငံရေး နဲ့ ပုဂ္ဂလိက လွတ်လပ်ခွင့်များ ပိုခံစားရနိုင်ဖို့ အကြီးမားဆုံး သော အပြောင်းလဲတခု ဖြစ်လာပါတယ်။
Civil Rights Movement မှာထင်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင်များကတော့ လူမည်းအမျိုးသမီး Rosa Park၊ (လူဖြူကို ဘတ်စ်ကားထိုင်ခုံဖယ်ပေးဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့သူ) ၊ လူမည်းအခွင့်ရေးခေါင်းဆောင် မာတင်လူသာကင်း ဂျုနီယာ Martin Luther King Jr., Harriet Tubman, Sojourner Truth, W.E.B. Du Bois and Malcolm X တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာမာတင်လူသာကင်း Jr. ရဲ့ “I haveadream” မိန့်ခွန်းဟာလည်း နာမည်ကျော်ကြား လူသိများပါတယ်။
Kသုံးလုံး (Ku Klux Klan) လူဖြူအစွန်းရောက်မြေအောက်အဖွဲ့ရဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ဆောင်ခြင်းများဟာ ၁၉၆၀ပြည့်နှစ်တွေမှာ Civil Rights Movement လှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှာ တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များမှာ ဗုံးဖောက်ခြင်း၊ လူအခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ လူဖြူ နဲ့ လူမည်းများကို ကြိုးပေးသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်းများ စတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပြီး Civil Rights Movement ကို ဖြိုခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အဖြူရောင်ဝတ်ရုံကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး မျက်လုံးနှစ်လုံးသာဖော်တဲ့ ခေါင်းစွတ်ချွန်ကြီးများဆောင်းကာ လက်ကမီးဒုတ်များကို ကိုင်ဆောင်ကာချီတက်အင်အားပြလေ့ရှိတယ်။
၁၉၆၅မှာ Kသုံးလုံးအဖွဲ့ဝင်လေးဦးအား လူဖြူ လူ့အခွင့်လှုပ်ရှားသူ အမျိုးသမီးတဦးကို အယ်လ်ဘားမား ပြည်နယ်မှာ သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက် KKK အဖွဲ့ရဲ့ ရက်စက်မှုတွေဟာ အနည်းငယ်လျော့ပါး ပပျောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၇၀ပြည့်လွန်နှစ်များမှာတော့ နီရိုနာဇီ အဖွဲ့များ နဲ့ အခြားလက်ယာစွန်းရောက် အဖွဲ့စည်းများနဲ့ ပူးပေါင်းမိလာပြီး ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်တွေမှာတော့ အဖွဲ့ဝင် ၆ ထောင်နဲ့ တသောင်းရှိလာခဲ့ပြီး အများစုကတော့ တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များမှဖြစ်တယ်။
၂၀၁၇ ဩဂုတ်လ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်၊ ချာလက်စ်ဗေးလ် Unite the Right rally လက်ယာအစွန်းရောက် များ စုစည်းမှုချီတက်ပွဲမှာ လက်ယာအစွန်းရောက် လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒီအဖွဲ့များအပြင် K သုံးလုံးအဖွဲ့ဝင် ၅၀ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ တန်ပြန်ဆန္ဒပြသူ counter-protestors အဖွဲ့များနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကာ လူတဦးသေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၃၀ကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို သမ္မတထရန့်ဟာ မရှုံချခဲ့တဲ့အပေါ် သမ္မတကိုပစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီး သမ္မတထရန့်ဟာ လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒီတွေကို ထောက်ခံသူလို့ ယူဆခဲ့ကြ တယ်။
လက်ယာယိမ်း လူဖြူအစွန်းရောက်များဟာ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် ကို ထောက်ခံသူများဖြစ်ပြီး။ သူတို့ ကြွေးကြော်သံထဲမှာ Hail Trump (ဟိုင်း ဟစ်တလာ Hail Hitler ကဲ့သို့ ဂျာမန်လို အလေးပြုခြင်း) You/ Jews will not replace us, (White Supermacist Slogan, လူဖြူအမျိုးသား ရေးအစွန်းရောက်ဝါဒီ တွေရဲ့ကြွေးကြော်သံ) South is raising again, (ကျွန်စနစ်ကို ထောက်ခံသော တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များ) Blood and Soil စတဲ့ နာဇီဂျာမဏီပါတီရဲ့ ဂျူးမုန်းတီးရေး anti-Semitic ကြွေးကြော်သံများ ၊ ကျွန်စံနစ်ကိုထောက်ခံတဲ့ confederate flag နဲ့ အခြား လူဖြူအစွန်း ရောက် အလံများ၊ ကေသုံးလုံး အလံများ၊ semi-automatic သေနတ်များ၊ မီးဒုတ်များကို ကိုင်ဆောင် အင်အားပြချီတက်ခဲ့ ကြတယ်။
သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာ လူဖြူအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို တရားဝင်မရှုံချခဲ့ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ 2020 အတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးထဲမှာ လူမည်းလူမှု့အဖွဲ့အစည်းတွက် ရေးဆွဲထားတဲ့ Platinum Plan မှာတော့ K သုံးလုံးနဲ့ Antifa (Anti-Facisit) အဖွဲ့စည်းတွေကို သူ သမ္မတ အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရရင် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့စည်းတွေအဖြစ်ကြေညာ ပေးသွားမယ်လို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။
The Turner Diaries ဝထ္တုကို လူဖြူအစွန်းရောက် နီရိုနာဇီ Neo-Narzi တဦးဖြစ်တဲ့ William Luther Pierce က ၁၉၇၈မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ယာအစွန်း ရောက် လူဖြူအမျိုးသားရေးပြင်းထန်သူများ အတွက် ကျမ်းတစောင် “bible of the racist right” လို့တောင် တင်စားပြောရလောက်အောင် လက်ယာအမျိုးသားရေး ဝါဒီများ လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒီများအတွက် လက်စွဲစာအုပ် တအုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီ ဝထ္တုရဲ့ ကျောရိုးကတော့ အမေရိကန်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရကို လူမျိုးရေးဝါဒီများ၊ လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒီများက ဆန့်ကျင်တဲ့စစ်ပွဲ၊ နူကလီးယားစစ်ပွဲ၊ လူဖြူမဟုတ်တဲ့သူများကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ပစ်တာစသည် ဖြင့် လူဖြူအစွန်းရောက် ဝါဒီများကို အဓိကဇာတ်ကောင်များအဖြစ် ရေးဖွဲ့ထားတယ်။
ဧပြီလ ၂၃ရက် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၁၆၈ သေဆုံးပြီး၊ ၆၈၀ ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သမိုင်းမှာ လူအသေအပျောက်အများဆုံး ပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု တခုဖြစ်တဲ့ Oklahoma City အိုကလာဟိုးမား ဗုံးဖောက်မှုရဲ့ အဓိက တရားခံဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းမှာပေါက်ပွားလာတဲ့ အကြမ်းဖက်သမား Homegrown Terrorist, Timothy J. McVeigh ဟာ ဒီစာအုပ်ရဲ့ ဩဇာလွမ်းမိုးမှုကိုခံထားရသူတဦး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ FBI ရဲ့ စစ်ချက်တွေအရသိနိုင်ပါတယ်။
The Turner Diaries ရဲ့ အထွတ်အထိပ် အဖြစ်ဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်းဖြစ်တဲ့ “the Day of the Rope,” ကြိုးမိန့်ပေးပွဲနေ့ဆိုတဲ့ လူများစွာကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကြိုးမိန့်ပေးတဲ့နေ့ဟာ လူမည်းများနဲ့ သူတို့ကို ထောက်ခံတဲ့လူဖြူများကို အစွန်းရောက်များက ကြိုးပေး သတ်ဖြတ်တဲ့ ပြည်သူ့တရား စီရင်ခန်းအဖြစ် “the Day of the Rope,” အသားပေးရေးသားထားခဲ့တယ်။
၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က သမ္မတထရန့်ကို ထောက်ခံသူများ အမေရိကန်လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ကို ဝင်ရောက် အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်ခဲ့ချိန်မှာ လွှတ်တော်ရှေ့မှာ ကြိုးစင်ပုံစံတူကို သမ္မတထရန့်ကို ထောက်ခံသူများက ဆောက်လုပ်ထားခဲ့တာ ဟာလည်း ဒီဝထ္တုရဲ့ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတခုပဲဖြစ်တယ်။ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ အချက်အချာအဆောက်အအုံဖြစ်တဲ့ US Capitol ကွန်ကရက်စ်အဆောက်အအုံကို သမ္မတထရန့်ကို ထောက်ခံသူများ ဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာလည်း အစိုးရကိုတော်လှန်ဖို့၊ အစိုးရပိုင်း တာဝန်ရှိသူများ ကို လက်ရဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာတွေဟာလည်း ဒီစာအုပ်ရဲ့ ကျောရိုးဇာတ်လမ်းထဲက အတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြ ခြင်းဖြစ်တယ်။
Proud Boys မြန်မာလိုဘယ်လို ဘာသာပြန်ရမလဲ မာန်တက်နေသောကောင်ဆိုးလေးများအဖွဲ့? အမျိုးသားသီးသန့်သာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်သော လက်ယာစွန်းရောက် အမျိုးသားဝါဒီ၊ ဖက်ဆစ်လက်သစ်ဝါဒီ Neo-Fascist မဟာဖိုဝါဒီများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လက်နက်ကိုင် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး အမေရိကားနဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံများမှာ နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ ဒီအဖွဲ့ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး လူဖြူအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်တွေ ၂၀၁၇ခုနှစ် Charlottesville Virginia မှာ အင်အားပြ ချီတက်ခဲ့တဲ့ Unite the Right rally ပွဲမှာ ဦးဆောင်ပြီး လူဖြူအစွန်းရောက်များနဲ့ ပူးပေါင်းချီတက်ခဲ့ကြတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာတော့ လက်ရှိအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် အာဖရိကန်-ကျူးဘား အမေရိကန်လူမျိုး Enrique Tarrio က ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့တံဆိပ်ကတော့ အနက်ခံပေါ်မှာအဖြူရောင်ကြက်ဖပုံနဲ့ဖြစ်ပြီး နောက်မျိုးက တော့ အနက်ခံပေါ်မှာ အဝါရောင်သံလွင်ခက်နဲ့ Proud Boys ရဲ့ အတိုကောက် PB စာလုံးကို တံဆိပ်အဖြစ်အ သုံးပြုကြတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ဟာ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကို ထောက်ခံအားပေးသူများဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုလည်း သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်တောင် တနိုင်ငံလုံးကြည့်ရှု့နေတဲ့ 2020 Presidential Debate မှာ “Pround Boys, Stand Back and Stand by” လို့ သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုကို အသိမှတ်ပြုခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။
Proud Boys ရဲ့ anti-semitic ဂျူးမုန်းတီးရေး ကြွေးကြော်သံကတော့ 6MWE ပဲဖြစ်ပါတယ် အဓိပ္ပါယ်က “6 Million Wasn’t Enough” နာဇီဂျာမဏီပါတီ လက်ချက်နဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ Holocast Victims ဂျူး ၆ သန်းကို ရည်ညွန်းတာပါ၊ ဂျူး ၆သန်းသေဆုံးခဲ့တာတောင် မလုံလောက်သေးဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင် အာဖရိကန်-ကျူးဘားအမေရိကန်လူမျိုး Enrique Tarrio ဟာDecember 12ရက်၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီ သမ္မတထရန့်ကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာ လူမည်းChurch ရဲ့ Black Live Matter ဆိုင်းဘုတ် ကို မီးရှို့ဖျက်စီးမှု၊ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု့နဲ့ ဖမ်းဆီးအရေးယူခံနေရပါတယ်။
လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒီတွေ၊ လူဖြူအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်တွေ၊ လူဖြူအမျိုးသားရေးခရစ်ယာန် စတဲ့ အခေါ် အဝေါ်တွေ ဘယ်လိုပဲပြောင်းသွားပါစေ။ သူတို့မှာ တူညီတဲ့ ဦးတည်ချက် ခံယူချက်ရှိပါတယ် ဒါကတော့ အသားအရောင်ရှိတဲ့ မည်သည့်လူမျိုးကိုမဆို မုန်းတီးခြင်းနဲ့ လူဖြူများသာ ထိုအသားရောင်ရှိလူမျိုးတွေကို အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာရှိရလောက်အောင် မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာတရားများစွာ၊ ခံယူချက်မတူအယူဝါဒပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ခွင့် ရှိဖို့လိုအပ်ပါ တယ်။ ဒါမှလည်း တိုးတက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ လူ့ဘောင်တခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်စနစ် - အပိုင်း (၃)
White Christian Nationalism လူဖြူခရစ်ယာန်လူမျိုးရေးဝါဒ
White Christian Nationalism လူဖြူခရစ်ယာန်လူမျိုးရေးဝါဒ၊ ဒီဝါဒကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အခြေခံ အတွေးအခေါ် ကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ခရစ်ယာန်များထူထောင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ရှေးရိုးစွဲ ခရစ်ယာန် စံနှုန်းတန်ဘိုးများ နဲ့သာ အုပ်ချုပ်သင့်တဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံရေးနွယ်တဲ့ ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Restrictive Nationalism နဲ့ တွေးခေါ်ယူဆချက် ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ Restrictive Nationalism ကတော့ အမေရိကန်ပြည်ဖွား၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူတွေသာအုပ်ချုပ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ လူမျိုးရေးဝါဒ တခုဖြစ် ပါတယ်။ ဒီ ခရစ်ယာန်လူမျိုးရေးဝါဒီတွေရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်ကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ဘုရားသခင်အတွက်ပြန်လည် ယူဆောင်ပေးဖို့ Taking America Back for God ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ခရစ်ယာန်အမျိုးသားရေးဝါဒီများ ယုံကြည်လက်ခံသောစံနှုန်းများကို အမေရိကန်အစိုးရ အနေဖြင့်ချမှတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ခံယူထားတာဖြစ်တယ်။
အာဏာအတွက် နိုင်ငံရေး ပါဝါအတွက် လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုရဖို့ နိုင်ငံရေးသမားတိုင်းလိုလိုက ကြိုးစားကြ ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတင်မကဘူး ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံတိုင်းလိုလို နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုကြတယ် နိုင်ငံရေးမှာယှဉ်ပြိုင်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါ သိက္ခာရှိစွာယှဉ်ပြိုင်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းနောက်ခံအရ လူဖြူကြီးစိုးရေးအင်အားစုနဲ့ သူတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့အင်အားစုဆိုတဲ့ အုပ်စုနှစ်စုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်စုကို တစုထဲဖြစ်အောင် တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ထူထောင် တည်ဆောက်ရတဲ့ အခါမှာ အပေါ်မှာရေးသားခဲ့သလို နိုင်ငံသားရပိုင်ခွင့်အတွက်၊ လူမည်းအခွင့်အရေးတွက်၊ လူ့အခွင့်အရေး အတွက် တိုက်ခဲ့ရတဲ့ တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာမှာ လူပေါင်းများစွာရဲ့ အသက်သွေးနဲ့ရင်းပြီးမှ အမေရိကန်ရဲ့ ကွန်စတီကျူရှင်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။
၂၀၁၆ ခုနှစ် သမ္မတထရန့်ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရချိန်ကစလို့ အတိတ်က အနာရဲ့ အနာဖေးကို ပြန်လှန်လိုက်သလိုမျိုး လူဖြူ၊ လူမည်းလို ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ လူမျိုးရေးကိစ္စတွေ၊ အခြားအသားရောင်ရှိတဲ့ လူမျိုးစုများကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတွေ၊ လူဖြူအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်များ နီရိုနာဇီအဖွဲ့များ နဲ့ အခြားသော Cultist အယူလွဲအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ QAnon လို far-right conspiracy theory ကိုထောက်ခံသော (သမ္မတကြီးထရန့်က တန်ပြန်ဆန့်ကျင်သူအဖွဲ့များလက်ကနေရော၊ စာတန်လက်ထဲကနေရော ကယ်တင်မယ့်သူဖြစ်တယ်)ဆိုတဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင်အတွေးကို ခံယူတဲ့ အဖွဲ့များကို နေရာပေးလာခြင်းများ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လုပ်ဆောင် ပြီး နိုင်ငံရေးပါဝါအတွက် ကစားကွက် တခုအနေဖြင့် အသုံးချလိုက်ချိန်မှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းမှာ ဘက်နှစ် ဘက် တိတိပပ ခွဲခြားလိုက်မှန်း မသိပဲ၊ အမေရိကန်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲခဲ့ရတယ်။
အမေရိကန် နေပြည်သူတွေကြားတင်မဟုတ်ဘဲ အဝေးတနေရာက အမိမြန်မာပြည်တွင်းနေ ယုံကြည်သူများရော မယုံကြည် သူများကြားမှာပါ အုတ်အုတ်သည်းသည်းလှုပ်အောင် QAnon လို အယူလွဲခပ်ကြောင်ကြောင် အတွေးနဲ့ တရုတ်ကြီးလက်ထဲက သမ္မတထရန့်လာကယ်ပါ့မယ်ဆိုတာကိုပါ ယုံကြည်ပြီး တဘက်နဲ့တဘက်အငြင်းပွါးနေတာ ခုထိမပြီးနိုင်သေးတာ လက်တွေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ဤကားစကားချပ်.. )
ယူနိုက်တစ် United ပေါင်းစည်းခြင်း ဆိုတာ လူမျိုးမတူ ဘာသာမတူ အယူဝါဒမတူသူတွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွ ပေါင်းစည်းနေထိုင်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
မတူကွဲပြားမှု Diversity ဆိုတာ လူတဦးခြင်းရဲ့ မတူညီသော လူမှုရေးနောက်ခံသမိုင်းကြောင်း၊ ပင်ကိုစရိုက်၊ အတွေ့အကြုံ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ စသည်ဖြင့် မိမိရဲ့ ဖြစ်တည်မှု ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး မိမိ ကိုယ်ပိုင်သီးခြား ရပ်တည်မှုအဖြစ် ပြဌာန်းခြင်းကို Diverse မတူကွဲပြားခြားနားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထို့တူပဲ လူ့ဘောင် လောကကြီး အပေါ်ထားတဲ့ မတူညီသောအယူအဆ၊ ရှု့ထောင့်အမြင်၊ ချဉ်းကပ်ခံယူပုံ စသည်တို့ ကိုလည်း Diverse မတူကွဲပြားခြားနားခြင်းလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မတူကွဲပြားတဲ့ ရှု့ထောင့်အမြင်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမျိုး၊ အသားအရောင်၊ လိင်စိတ်ခံယူမှု၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ ကိုယ်ခန္ဓာမသန်စွမ်းခြင်း၊ အဆင့်အတန်း၊ ပညာအရည်အချင်း စတာတွေအပေါ်မှာ တဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်လေးစား အသိအမှတ်ပြုခြင်းလို့ဆိုရင်လည်း မမှားနိုင် ပါဘူး။
Discrimination and Divide
Discrimination ဆိုတာကတော့ အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ မတူကွဲပြားမှုတွေ အပေါ်မှာမူတည်ပြီး ခွဲခြားသီးခြား ဆက်ဆံခြင်း လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အသားအရောင်ကြောင့်၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကြောင့်၊ လူမျိုးကြောင့်၊ မသန်စွမ်းခြင်းကြောင့်၊ မိန်းမဖြစ်လို့၊ ​​ယောက်ျားဖြစ်လို့၊ ပညာမတတ်လို့၊ LGBTQ ဖြစ်လို့၊ ခန္ဓာကိုယ် ဝလို့ ပုလို့၊ ရုပ်ဆိုးလို့ စသည်ဖြင့်ခွဲခြားခြင်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ ဖယ်ကျဉ်ထားခြင်း စတာတွေအားလုံးဟာ ခွဲခြားဆက်ဆံ ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံလိုက်ရတဲ့ လူတဦးတယောက် သို့မဟုတ် လူမျိုးစုတစု သို့တည်းမဟုတ် လူနည်းစုတစုဟာ ကျန်တဲ့ လူများစုထဲက Divide အုပ်စုခွဲခြင်းခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်တယ်။
ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူ နဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း
ဘုရားသခင်က လူကို သူရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တူဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာက အတိအလင်းဆိုပါတယ် (Gen. 1:27) ဘုရားသခင်နဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ အညီဖန်ဆင်းထားသော လူသားတဦးနဲ့ တဦးခွဲခြားဆက်ဆံဖို့ လိုအပ်ပါရဲ့လား။ ဘုရားသခင်ကိုချစ်သော ယုံကြည်သူ သားသမီးများအနေနဲ့ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်ရဲ့ သဏ္ဍာန်နဲ့တူညီစွာ ဖန်ဆင်းထားသော လူသားတဦးရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးသင့်ပါတယ်။ တောင်အာဖရိက လူမည်းဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စမွန်တူးတူး ကတော့ လူဖြူဝန်ကြီးချုပ်ဆီပေးပို့တဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေး စာရဲ့ အဖွင့်မှာ ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားတဲ့ လူသားတဦးက နောက် လူသားတဦးဆီကို စာရေးသားပေးပို့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ ရေးသားခဲ့တယ်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး ၉ ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘုရားသခင်က နောဧ နဲ့ သူ့သားတွေကို ကောင်းချီးပေးပြီး ကမ္ဘာမြေအနှံ့များပြားစွာ မျိုးဆက်ပြန့်ပွါးဖို့ စေခိုင်းခဲ့တာကို နောဧရဲ့သားမြေးများက တနေရာစုနေထိုင်ဖို့ရာ ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ကောင်းကင်တမန်များအားဖြင့် ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးကွဲပြားစေခဲ့ပြီး ဤသို့အားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူမျိုးစုပေါင်းများစွာကို ဘုရားသခင်က ဖြစ်ပွားစေခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေအတွက် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဆိုတာ သခင်ယေရှု့ သွန်သင်ခဲ့တဲ့ လမ်းစဉ်မဟုတ်ပါဘူး။ ယေရှုခရစ်တော်ဟာလည်း သူ့ကိုယုံကြည်သူ၊ မယုံကြည်သူ ထောက်ခံသူ၊မထောက်ခံသူများကြားထဲမှာ ဟာမိုနီ ကျစွာ ဟန်ချက်ညီညီ သာသနာပြုသွားခဲ့တာပါ။ သခင်ယေရှုကျေးဇူးပြုခဲ့သော ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်တဲ့ ကယ်တင်ခြင်းတရားတော်ဟာ လူသားအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပြီး ယုံကြည်သူတိုင်းဟာ သခင်ယေရှု၌တလုံးတဝ ထဲဖြစ်ခွင့်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ် (ဂလာတိ ၃:၂၈)။
ရှင်မဿဲ ၁၅:၂၁-၂၈ မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ခါနန်အမျိုးသမီးရဲ့ သူ့သမီးအသက်ကိုကယ်တင်ဖို့ သခင်ယေရှု ထံတောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ သခင်ယေရှုဟာ တပါးအမျိုးသားဖြစ်လို့ ငြင်းဟန်ပြုခဲ့သောလည်း ခါနန် အမျိုးသမီးရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ တောင်းဆိုမှုကို လက်ခံခဲ့တာကြည့်ခြင်းဖြင့် သခင်ယေရှုဟာ လူတယောက်ခြင်းစီ ကို ဂရုတစိုက်နဲ့ အကြည့်အရှုရှိသော မေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ် လူမျိုးအသားအရောင်ခွဲခြားခြင်းကင်းသော ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ရောမ ၁၂ မှာကြည့်ရင်လည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့သာအောင်နိုင်ဖို့ လူများနဲ့ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာနေထိုင်ဖို့ ဝမ်းမြောက်သောသူတို့နဲ့ ဝမ်းမြောက်ဖို့ ဝမ်းနည်းသောသူတို့နဲ့ ဝမ်းနည်းဖို့ စသည်ဖြင့် လောကထဲမှာနေထိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကို ညွှန်ပြခဲ့ပြီး လူတို့ရဲ့ အပြစ်နဲ့ အလျှောက် ဘုရားသခင်သာ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ​သွန်သင်ခဲ့ ပါတယ်။ဒါကြောင့် သခင်ယေရှုကို နောက်လိုက်ယုံကြည်သူ မောင်နှမများအနေနဲ့လည်း ယေရှုကိုဗဟိုပြုတဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့ လူသားအားလုံးကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကင်းစွာနဲ့ မေတ္တာပြကာ ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ဝေဌဖို့ရာ အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။
ယနေ့လူငယ်နောင်လူကြီးလို့ ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ် နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေကို အနာဂတ်ကို သူတို့လက်ထဲသို့ လက်ဆင့်ကမ်းပေးအပ်တဲ့အခါမှာ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်တတ်အောင် သွန်သင်ခြင်း တခုထဲတင်မဟုတ်ဘဲ လောကထဲမှာ မယုံကြည်သူတွေကြားထဲနေထိုင်တဲ့အခါမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ရဲ့အရေးပါပုံ နဲ့ တကွ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဆိုတာ သခင်ယေရှုရဲ့တူတဲ့ နှလုံးသားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပါ သွန်သင်ဖို့ အင်မတန်ကို လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒီတွေ၊ လူမျိုးရေးဝါဒီ၊ လူလူခြင်းခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း တွေကို ကြီးထွားလာစေအောင် အားပေးမယ့်၊ မိမိအာဏာရရေးအတွက် အသုံးချမယ့် မည်သူ့ကိုမဆိုလောကမှာ နေရာ မပေးမိစေဖို့ သတိနဲ့ အသိနဲ့ ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ ထိမ်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျမတို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ အားလုံးဟာ အသားရောင်ရှိတဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်ပါ တယ်။
လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒီတွေ အမြင်မှာတော့ ကျမတို့ဟာ Colored တွေပါ။ ဒါကြောင့် လူဖြူကြီးစိုးရေးဝါဒီ တွေ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ တကျော့ပြန်ခေါင်းထောင်လာနိုင်ခဲ့ရင် အောက်ကဆိုင်းဘုတ်ထဲကလို မက်ဆီကန်၊ စပိန်ဆိုတဲ့ စာတွေအစား မြန်မာ၊ တရုတ်၊ မွတ်စလင်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်း၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည်ဖြင့် အစားထိုးရေးသားထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့က မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူး။
အဓမ္မ နဲ့ ဓမ္မယှဉ်ကျတဲ့ အခါမှာ ဓမ္မကသာနိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ လောကနဲ့ သမ္မာတရားယှဉ်လာရင် သမ္မာတရား ကသာ အနိုင်ရမှာမို့ လူပုဂ္ဂိုလ်စွဲကင်းကင်း၊ ပါတီစွဲကင်းကင်း နဲ့ ဘုရားအလိုတော်ကို နာခံနိုင်သော ယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့ ဧဖက် ၄:၁၅ ကဲ့သို့ “speaking the truth in love” မေတ္တာဖြင့် ဤစာကိုရေးသားလိုက်ရပါတယ် ဘုရားသခင်ထံမှ ငြိမ်သက်ခြင်း နဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာများ စာဖတ်သူရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ တည်ရှိနိုင်ပါစေ။
အိအိစိုး - ကျွန်ဘ၀နဲ့ ကျွန်စိတ်ကနေ လွတ်မြောက်ကြဖို့ အရေး Reviewed by MoeMaKa on 11:40 AM Rating: 5